भिखारीको ब्याग हरायो, प्रहरीले ब्याग भेटेपछि त्यसभित्रको पैसा देखेर उड्यो सबैको होस, कति रकम थियो ब्यागमा? – My Blog
भिखारीको ब्याग हरायो, प्रहरीले ब्याग भेटेपछि त्यसभित्रको पैसा देखेर उड्यो सबैको होस, कति रकम थियो ब्यागमा?
No Comments on भिखारीको ब्याग हरायो, प्रहरीले ब्याग भेटेपछि त्यसभित्रको पैसा देखेर उड्यो सबैको होस, कति रकम थियो ब्यागमा?
सडक किनार वा घर घरमा गएर माग्ने वा मन्दिरमा बाहिर बसेर अरुसंग सहायता मागेर आफ्नो दैनिकि चलाउनेलाई भिखारी वा मगन्ते भनिन्छ । आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि उनिहरु जीउनकालागि सहायताको भिख माग्दछन् । तर यसरी भिख माग्ने मानिस साढे २ लाख भन्दा बढि रकम हराएको उजुरी गर्न प्रहरी चौकिमा पुगे, अचम्भित को नहोला? यस्तै भएको छ भारतको महाराष्ट्रमा ।
महाराष्ट्रको वैजनाथ मन्दिरमा बसेर दैनिक भिख माग्ने बाबूराव नायकवाडे नामक एक भिखारी आफ्नो ब्याग हराएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिन पुगे । जब ब्याग भेटियो त्यसमा फेला परेको मोटो रकमले प्रहरी समेत चकित परे ।
बाबूराव, वैजनाथ मन्दिरमा हुदै आउने जानेसंग दैनिक भिख मागेर दैनिकि चलाउदै आएका थिए । उनी जे जति दानमा पाउथे सबै जम्मा गर्दै गए । तर उनले रकम जम्मा गर्दै गरेको ब्याग हरायो । जसका कारण उनको होसहवास उड्यो र खोजी गरीदिन सहायता माग्दै उनी प्रहरीकोमा पुगे ।
बाबूरावको उजुरी पछि शुरुमा पर्ली प्रहरीले भिखारीको ब्यागमा कति न रकम होला भनेर खोज्न आनाकानी गरे । तर बाबूरावको रोदन, उनको दयनिय अवस्था र कानुनत उजुरी आएपछि कर्तब्यको रुपमा प्रहरीले ब्यागको खोजी तिव्र पार्यो । अन्ततः करिब ३ घण्टाको खोजीपछि उनको ब्याग भेटियो । जसमा भारु १ लाख ७२ हजार २ सय ९० अर्थात २ लाख ७६ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ फेला पर्यो । प्रतीकात्मक तस्वीर
← विहे नगरीकनै बच्चा पाउन चाहन्छु : नम्रता सापकोटा → ४ वर्षकी बालिकाले गोठमा लाइटर खेलाइन्, आगलागी हुँदा जलेर निधन